တစ်ပါတ်အတွင်း နိုင်ငံတကာမှာ လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်း (၁၀)ပုဒ် | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့ အခုလို အချိန်မျိုးမှာ သီချင်းလေးနားထောင်လိုက်ရင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ စိတ်တွေကို လန်းဆန်းသွားစေမှာပါ။
ဒီတော့ နိုင်ငံတကာမှာ ဘာသီချင်းတွေက လူကြိုက်များပြီး ခေတ်စားနေလည်းဆိုတာကိုလည်း သိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် My Yangon ကနေ တစ်ပါတ်အတွင်း နိုင်ငံတကာမှာ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပြီး Billboard Top Ten စာရင်းမှာ နေရာယူထားတဲ့ သီချင်း (၁၀)ပုဒ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. The Box- Roddy Ricch
3. Don't Start Now- Dua Lipa
4. Life is Good- Future, Drake
6. Roxanne- Arizona Zervas
7. Adore You- Harry Styles
8. Intentions- Justion Bieber, Quavo
9. Someone You Loved- Lewis Capaldi
10. Everything i wanted- Billie Eilish
Event & Entertainment Read 243 times